चीन कोरोना भाइरसका विरुद्ध लंडाइ लडिरहँदा युरोप र अमेरिका ठट्टा गर्दै थिएः डा. युवराज संग्रौला « Dainiki
१० चैत्र २०७६, सोमबार १२:०२
चीन कोरोना भाइरसका विरुद्ध लंडाइ लडिरहँदा युरोप र अमेरिका ठट्टा गर्दै थिएः डा. युवराज संग्रौला
१० चैत, काठमाडाैँ । हामी सबैले गंभीर चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामी एउटा राष्ट्र हौं। तेसैले हामीले एउटा राष्ट्रको जस्तो ब्यवहार गर्न पनि जान्नुपर्छ। हामी अहिले संसारनै अप्ठ्यारो अवस्थामा आएको समयमा छौँ। धेरै कुराहरु बाहिर प्रकट भएका छन र देख्न सकिन्छ। मन्थन गरौँ, चिन्तन गरौं, फेरि मन्थन गरौँ।
ख. पुजिंबाद र समाजबादबीचको फरक प्रष्ट देखिएको छ, अहिले। चीनमा जब यो भाइरसका विरुद्ध लंडाइ चलिरहेको थियो, सबैलाइ सरकारले गर्ने सहयोग उस्तै थियो। गरिबले काम गर्न नपाएर मर्नु पर्ने र धानीले अलिसान महलमा आइसोलेसनमा बस्ने स्थिती देखिएन। तर पुजिंबादि अमेरीकामा धनिका लागि महंगा अस्पताल छन, सबै सुबिधा छ्न।
तर तल्लो आर्थिक अवस्था भएका जनताको हालत खराब छ। त्याँहाका संचार माध्यामले त्यो कुरा किन बाहिर ल्याउदैनन ? किनभने सबै संचार माध्याम कर्पोरेट हाउसका आधिनमा छ्न र उनीहरुको स्वार्थ भ्रष्ट पुंजिबादको सेवा गर्नु हो। यता नेपालमा पनि उन्को प्रभाव छ, तेसैले ट्र्म्पको मुखमा मास्क लगाएको तस्बिर छाप्दैनन। माहामारीको सामाना गर्न पुंजिबाद असफल हुने रहेछ भन्ने कुरा, २० हजार मनिसमा संक्रमण हुदां ६ हजार मरेका घटनाले पुष्ठि गर्छन । नेपालमा पनि धनीहरुको यो माहामारी रोक्ने सहयोग देखिएन। धनीका अस्पतालमा ज्वोरो आएका मानिस छिर्नै नपाउने अवस्था पो आयो।
ग. पस्चिमी पुजिवादी अर्थतन्त्रका लागि यो माहामारी त्रासधीपुर्ण हुने देखियो। एसिया खासै प्रभाबित नहुने पनि देखियो। एसियामा माहामारीलाई रोक्न चीनको सहयोगले भुमिका खेल्ने पनि देखियो। तर पस्चिमी प्रभाबमा रहेको नेपालको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले चीनलाई माहामारीका समयमा नेपाल हाम्रो असल मित्र हो भन्ने भाव देखाउन सकेन। यो कुरा सरकार र दलहरुलाई अहिले पनि महसुस भएको जस्तो लाग्दैन। यस्ले नेपालको चीन सङ्गको कुटनीतिमा धमिरा लागेको आंशका गरिएको छ।
घ. चीनले अहिले जसरी डब्लुएचओ र युएनसँग समन्वय गर्दै सहयोग आगाडि ल्यायो, तेस्बाट कुटनितीमा उस्को परिपक्वता प्रकट भयो। उस्को उत्पादन प्रणाली पुन संचालनमा आयो। उस्को अर्थतन्त्रले क्षेती ब्योहोर्नु पर्ने अवस्था अब रहेन । तर बिकसित देशको अर्थतन्त्रले ठूलो क्षेती ब्यहोर्नु पर्ने देखियो। चीनले एक अर्थमा छंलाङ्ग मार्यो भन्दा हुन्छ।अन्तरास्ट्रिय संबन्धमा चीनको भुमिकालाई बर्खास्त गर्न अब संभब छैन।
४. के हुन्छ नेपालमा चिनको ससक्त उदयको यो अवस्था र पश्चिमको यो संकटले ? थुप्रै प्रभाब पर्ने कुरा टडकारो छ। भारत यदि यस माहामारीको प्रकोबमा चीनकै तहमा आयो भने, भारतलाई यो समस्या संबोधन गर्न संभब हुँदैन । पैसा र बिज्ञान नभएर होइन। भारतको जनसंख्या सचेत छैन र नेपालमा जस्तै अनुशासनहीन अल्पज्ञानको सिकार भएको छ। यहाँ पनि कालोबजारी र भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ। भारतमा माहामारी फैलियो भने, नेपाल तहसनहस हुन्छ।
के सहयोग माग्ने हक छ हाम्रो चीन सङ्ग अझै ? सहयोग त चीनले फेरि पनि गर्छ। तर उनीहरु हामीलाई सहयोग दिनु अगाडि एक पट्क हाम्रो प्रवृत्ति देखेर मुस्कुराउने छ्न। के पश्चिमाले हामीलाई चिकित्सक र औषधी ल्याउने छ ? तेसैले भनेको होला नि, श्रीमती श्रीमान छोडन सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिन्न भनेर। हामीले भुकम्पमा चीनले लगाएको गुन स्मरण सम्म गरेका छौँ ? सरकारमा बस्नेहरुले मुल्यांकन गर्दा राम्रो होला।
क. चीनसङ्ग सहयोग मागोस। चिकित्सक, औषधि र प्रबिधि तत्काल ल्याओस। आइसोलेसन गृह निर्माणमा सेनाको प्रयोग गरोस। बांचे मात्र पछि प्रगति गरिने हो।
ग. सिमाना बन्द गरियोस र तराइका सबै शहरमा उच्चस्तरीय स्वास्थ समुहहरु पठाइयोस। तराइका जनतालाई आतंकबाट जोगाइयोस।
घ. घनी र ठुला मानिस बेइमान हुन्छ्न भन्ने प्रष्ट देखिसकियो। गरिबहरुलाई रासन बाड्ने धेरैवटा स्टोरहरु शुरु गरियोस।